လွင်မိုးမတရားစီးပွါးရှာနေသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လွင်မိုးမတရားစီးပွါးရှာနေသည်။
မင်းသား လွင်မိုး ရဲ့ကုမ္ပဏီ က ဘူဒိုဇာ တွေ ထား ဝယ်ဒေသ ကကျေးရွာ
တွေ ကို ဖျက် ဆီးနေ
ထားဝယ်နောက်ဆုံးသတင်း – နဘူးလယ်ဒေသ ထိန်ကြီးကျေးရွာ ဦးအေးဖေ+ဒေါ်သီး တို့ရဲ့ သီဟိုဠ်ခြံထဲကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လွင်မိုး၏ ကုမ္ပဏီမှ ဘူဒိုဇာများ ညဘက်အထိ ထိုးဖျက်နေ လျော်ကြေးကိစ္စလုံးဝစကားမပြောသေးပါ ။
အတိအကျ သိလိုလျှင် နေမျိုးဝေ ဝ၉-၈၆၁၀၇၁၉ သို ့ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒီကောင် အလကားကောင်။ အရင်တုန်းကတော့ အနုပညာသည်ဆိုပြီးအားပေးခဲ့တာ။အကြောင်းမသိခင်ကတော့ ဪ သူ့ရဲ့ ခရီးသွားနေသည်ကိုကြည့်ပြီး မြန်မာ့သဘာဝအလှတွေ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့တွေကိုထုတ်ဖေါ်ပြသသူဆိုပြီးအားပေးမိတာ။ဒီကောင်ကလည်း အာဏာရူးတွေနဲံ တစီးပွါးထဲရှာစားတဲ့ ဝိသမလောဘသမား။ အလကားကောင်။
ခရီးသွားတာက အကောင်းဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာ ဘယ်နားစီးပွားရှာကောင်းမလဲ လို့ လိုက်လေ့လာတာနေမှာပေါ့နော့်
လွင်မိုးက ပုပ်ပွကြီးဖြစ်နေပြီလေ … ရုပ်ရှင်မှရိုက်လို့မရတော့တာ သူကဟိုတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းနေတယ်လေ ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ စာစောင်နံမည်နဲ့လူလေ …. သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်စားနေတာပေ့ါ … သူဝယ်ထားတဲ့ကင်မရာကြီးတော့ နှမျှောစရာနော် … အရင်ကဓာတ်ပုံပဲရိုက်တော့မလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ သူ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ပုဂံက နန်းမြင့်မျှော်စင်မှာ ၂၀၀ဝ ပေးတက်ရင် သူပုံတွေအလကားတွေ့ရတယ် … ခုတော့အဲမျှော်စင်တက်ရင် ဘယ်လောက်လဲသိတော့ဝူး … ဖွင့်ကာစကတက်ဖူးတာ … အဲမျှော်စင်ကိုလည်း ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ စာစောင်နံမည်နဲ့လူပဲပိုင်တာလေ သူကအရင်ကငပွေနော် သူ့သမီးလေးတွေဝဋ်မလည်ပါစေနဲ့ ….
ဘက်ဂရောင်းတောင့်ရင် ဒီနိုင်ငံမှာ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်။
သူလဲ ခင်ရွှေအနောက်လိုက်ချင်လို့နေမှာပေါ့။ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ သူတို့ခေတ်ကုန်သွားပြီဆိုတာ ကို လောလောဆယ်ဆယ်လက်ခံရဖို့ခက်နေကြရှာတယ်။ သနားပါတယ်။
သမီးလေးတွေအတွက် စီးပွားရှာတာနေမှာပေါ့။ သေချာလေ့လာကြည့်ပါဦး။ လူတစ်ဖက်သားကို အရမ်းမပြောပါနဲ့။ ဟုတ်ရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် မဟုတ်ရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့
အယ်။ သမီးလေးတွေအတွက်တဲ့လား။ သနားစရာ ကုလားသတ္တဝါ အဲလေ။သူ့သမီးကဖြင့် ဂျာနယ်ထဲမှာ အဖေ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုလုပ်ပြအုံးမှာတဲ့။
cobra: ပိုက်ဆံ ရှိရုံလောက်ဆို ရပါပြီ. . .
ဒါပေမယ့် စီးပွါးရေး သမား တွေ အကုန်လုံးက အာဏာပိုင် နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ပဲ လုပ်ကြတယ်လေ
အဲတော့ မကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့. . .
ဟေး ဟေး … ဘိုဒူဆာတွေနဲ့ တူးနေတာ …. သူ ကျူးကျော်ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ …
တွင်းတူးပြီးရင် ဝင်သေမလို့ပါတဲ့ဗျို့ … ဟိဟိ
ကပ်ဖား ၊ ခွာဖား ၊ လျှက်ဖား .. အလိုမရှိ
အဲဒီသတင်း တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး
အကယ်၌ ဟုတ်ခဲ့လျှင် ပေါ့လေ…
အဲဒီဘူဒိုဇာ သူတက်မောင်းတာမဟုတ်ဘူး သူ့မှာတာဝန်မရှိဘူး.. လို့များ
ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ ပြောနေကျလို ……………….
ဟုတ် မဟုတ်သေချာချင်ရင် ဖုန်းဆက်မေးကြည့်ပါဆို။
သံသယတွေကပွါးလိုက်တာ။ သမီးချောလေးရှိတယ်ဆိုတော့မျက်နှာကြီါ်ရာ ဟင်းဖတ်ပါချင်ကြသကိုး။
ရုပ်ကလည်း အရင်ကလောက် ကျက်သရေမရှိတော့ဘူး
သူသမီးကတော့ ရေရေလည်လည် cute တယ်
အော် တယ်ခက်တဲ့ကာလသားတွေပဲ ဒုသနသော မကြောက်ကြဘူးလား သူ့သားမက်က ငါထင်တယ်နော်
ရင်တွေတုန်လိုက်တာဦးတို.ရယ်….. ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်လဲ ????
ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး အနုပညာအလုပ်မလုပ်တာတော့အမှန်ဘဲ ပိုက်ပိုက်ကတော့ဘယ်ကရလည်းမသိဘူး တော်တော်လေးတော့ ချမ်းသာနေတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့သမီးတွေတောင် ရောင်းစားမလားတိဝူး….
တစ်ပိဿာ ဘယ်ဈေးတဲ့လဲ…။ လက်ကားတော့ ယူနိုင်ပါဘူးအေ………. လက်လီပဲဝယ်စားမယ်…။
လွင်မိုးအကြောင်းကတော့ ကြားနေတာ ကြာပါပြီ။ ခရီးသွားနေသည်ကားနဲ့ ဘိန်းဖြူတွေ ခိုးထုတ်နေတယ်အထိကြားပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းသားဂျီးတွေကြားမှာ စီးပွားရေးလောကသို့ ခြေရောလက်ရောဦးနှောက်ပါ စုံပစ်ဝင်တဲ့ မင်းသားပေါ့။ သရုပ်ဆောင်က ကောင်းပြီးသားဆိုတော့ မျက်နှာကတော့ အော်ရီဂျင်နယ် ပြောင်မှာပါ။